चेतावनी: QUERY प्याकेट पठाउँदा त्रुटि। PID = 4227 मा /home/admin/web/info-all.com/public_html/wp-includes/wp-db.php लाइन मा 2056
डाक्टर, क्लिनिक, बीमा | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: डाक्टरहरू, क्लिनिक, बीमा
पुरुषले स्ट्रोक पछि प्याज गरेपछि पुरुषहरू
एक स्मीयर पुरुष पछि पेशाब समयमा दुखाई तपाईले अझै एक वृद्धि को अन्त मा एक ट्रिपर हुक। यो उपचार गर्न आवश्यक छ। जति चाँडो त्यति राम्रो। केटोरोल हुँदा दुखाइ। यो कस्तो थियो यो यहाँ छ। यो मेरो पहिलो थियो ...
ईकोकोर्डियोग्राफी र हृदयको डप्प्लर कस्तो फरक छ?
इकोकार्डियोग्राफी र कार्डियक डोपलर सोनोग्राफी के फरक छ? डोप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिसको निदानको लागि भरपर्दो विधिहरू मध्ये एक हो। यो अक्सर टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, बेहोशी हुनुको कारण पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।
एक पुरानो बीमारी के हो र यो रोक्न सम्भव छ?
एक पुरानो रोग के हो र यसलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छ? न त पुरानो रोगहरू न मृत्युबाट बच्न सकिन्छ ... कसैलाई पनि रोक्न असम्भव छ। तपाइँको पूर्ण जीवनको लागि तपाइँ एक जीवमा सक्नुहुन्छ ...
केटीहरु, माइक्रोफ्लोरा को विश्लेषण मा, योनि परिणाम बिरुवा: माइक्रोफ्लोरा भेटिएन। मलाई भन्नु भनेको के हो?
केटीहरू, माइक्रोफ्लोराको लागि विश्लेषणमा, योनी परिणामको संस्कृति: माइक्रोफ्लोरा फेला परेन। यसको मतलब के हो मलाई भन केहि राम्रो छैन। dysbiosis। वनस्पति हुनु पर्छ। र ल्युकोसाइट्स पनि। माइक्रोफ्लोराको अभाव BAD संकेत हो। एक पवित्र स्थान हुनु हुँदैन ...
कृपया मलाई बताउनुहोस् कि दन्त चिकित्सकहरु लाई टार्टार हटाउन को लागी ?? कस्तो र कति समय लाग्छ? के यसले चोट पुर्याउँछ?
कृपया मलाई बताउनुहोस् कि डेन्टिस्ट कसरी टार्टर हटाउँछन्? कसरी र कति समय लाग्छ? यसले चोट पुर्‍याउँछ? नडराउनुहोस्। सबै चीज चकलेटमा हुनेछ। jackhammer)))) राम्रो लेजर। यसले उनीहरूलाई चोट पुर्याउँदैन। आवश्यक छ ...
स्त्री रोगमा प्रश्न। पहेंलो शरीर के हो?
स्त्री रोगको बारेमा प्रश्न। कर्पस लुटेम भनेको के हो? तपाईं यसको बारेमा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ! कर्पस लुटेम त्यहाँ वर्णन गरिएको छ! कर्पस लुटेम अंडाशय को कर्पस ल्युटम (लेट। कर्पस ल्युटम) एक अस्थायी आन्तरिक ग्रंथि हो ...
मस्कोमा मोलहरू कहाँ हटाउने? नाम, ठेगाना, यदि कुनै हो भने - सम्पर्कहरू। अग्रिम धन्यवाद!
मस्कोमा मोलहरू कहाँ हटाउने? नाम, ठेगाना, यदि कुनै हो भने - सम्पर्कहरू। अग्रिम धन्यवाद! नेवी (मोल्स) हटाउनु अघि, एक चिकित्सकसँग परामर्श गर्न अपरिहार्य छ। यो एक dermatologist-oncologist छ। Dermatovenerologic औषधालय १, ... मा स्वीकार गर्दछ।
के तपाई कृपया मलाई भन्नुहुन्छ कि कम्तिमा क्यान्सरयार्स्कमा कहाँ पुग्ने?
कृपया मलाई क्रास्नोयार्स्कमा न्यूनतम जानको लागि बताउनुहोस्? तिनीहरू सरेका छन्, ती त्यहाँ छैनन्। Krasnoyarsk टेरीटोरी महामारी महामारी निगरानी, ​​सेनिमनिम Krasnoyarsk, Semapornaya, 413१7 दूरभाषको सेनेटरी र एपिडेमियोलोजिकल कल्याण (FSEB) को लागि फाउन्डेशन। : +391 (201 58 १) २०१-59-XNUMX-XNUMX (सेनेटरी न्यूनतम) ...
Ch P ES एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा नियुक्त परीक्षा कसरी गरिन्छ? : - कहाँ र कसरी यो परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ
हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा नियुक्त सीएच पी ES परीक्षा कसरी गरिन्छ? : - कहाँ र कसरी यो परीक्षा गरिन्छ यो निदान उद्देश्यको लागि, transesophageal प्यासि ((TEE) को विधि प्रयोग गरिन्छ, अन्यथा गैर-आक्रमणकारी इलेक्ट्रोफिजियोलोजिकल भनिन्छ ...
के यो अस्पतालमा क्लिनिकको अस्पतालमा पुग्न सम्भव छैन?
के पोलिक्लिनिकमा दर्ताको स्थान बाहिर बिरामी बिदा पाउन सम्भव छ? हो, एक बीमा प्रमाणपत्र को उपस्थिति र सम्भवतः धेरै polyclinics को लागी दृढता को साथ (उनीहरु विश्वास गर्छन् कि यो उनीहरुको काम होईन) केहि प्राप्त गर्नुहोस् ...
एन्डोस्कोपिक शल्यक्रिया के हो र यो लेपोरोकोपी बाट कसरी फरक छ। Ureter मा स्टोन।
एन्डोस्कोपिक सर्जरी के हो र यो लेप्रोस्कोपीभन्दा कसरी भिन्न छ। युरेटरमा ढुone्गा। एन्डोस्कोपिक - बिल्कुल चीरा बिना, एक मूत्रमार्ग ढुope्गामा जान्छ र यसलाई नष्ट गर्न कोशिस गर्दछ ... ल्याप्रोस्कोपिक पहिले नै छ ...
रासायनिक भरिएको के हो, हल्का भरने?
केमिकल फिलि What भनेको के हो? रासायनिक रासायनिक रूपमा मौखिक गुहामा केही समयको लागि निको हुन्छ, हेलिओलम्पसँग विकिरण पछि मात्र रासायनिक मोहर एउटा पेस्ट + पेस्ट सामग्री हुन्छ, यो निश्चितको लागि कडा हुन्छ ...
मस्कोमा फिर्ता उपचारको लागि एक क्लिनिक सल्लाह दिनुहोस्
मस्कोमा पछाडि उपचारका लागि क्लिनिकको सल्लाह दिनुहोस् यदि तपाईंलाई पछाडि उपचार गर्नु पर्ने भयो भने, उत्तम समाधान भनेको V.I.Dikul (Dikul क्लिनिक) को निर्देशन अन्तर्गत LOSINI Ostrov चिकित्सा पुनर्वास केन्द्र सम्पर्क गर्नुहोस्, र ...
कृपया मास्कोमा राम्रो दन्त चिकित्सक सल्लाह दिनुहोस्।
कृपया मस्कोमा एक राम्रो दन्त क्लिनिक सल्लाह दिनुहोस्। त्यहाँ एक छ। यसलाई "त्रिशूल दक्षिण" भनिन्छ। आवासीय परिसर "ब्लू बर्ड" को क्षेत्र मा अवस्थित छ (यो उत्तर बुटोभो हो), स्टारोकाचालोवस्काया सडकमा, You. तपाईं त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
कुन कुराले चोट पुर्याउँछ भने के गर्ने?
यदि जोर्नी दुख्छ भने के गर्ने? यो उपचार गर्न आवश्यक छ एक सुरूको लागि, एक डाक्टर द्वारा जाँच गर्नुहोस्। कारणहरू धेरै फरक हुन सक्दछन् - शारीरिक ओभररेक्शरेशनबाट गठिया र बर्साइटिस र सिनोवाइटिसको साथ आर्थ्रोसिस, गठिया पनि।
कस्ता परिस्थितिहरूमा दाँतमा मुकुट राखियो?
कस्ता अवस्थाहरूमा दाँतमा मुकुट राखिन्छ? तिनीहरूले मेरो पाँचौं दाँतमा धातु सिरामिकहरू राखे (मुस्कानमा देखिन्छ) जब दाँतको माथिल्लो भागको आधा भाग टुक्रियो। उनीहरूले भने कि एउटा अंश लामो समय सम्म चल्दैन, ...
मान्छे, मलाई भन्नुहोस्, मैले पहिलो-सहायता किट साल्वोस्सेल मलम्यानमा फेला पारेको - कुन वा के हो?
साथीहरू, मलाई भन, मैले औषधि क्याबिनेटमा सोलोकोसेरल मलम फेला पारेको छु वा केको लागि? रुँदै गरेको घाउहरू र जलेकोबाट सोलकोसिरिल। राम्रो कुरा। यस जेललाई "दोस्रो छाला" सोलोकोसेरल भनिएकोमा कुनै अचम्म छैन - टिश्यु पुनरुत्थानलाई उत्तेजित गर्ने मलम ... मलम ...
श्रीमानको शुरुवात चरणको मेरो पति, एएलटी एक्सएनमक्स, एएसटी एक्सएनमक्स, एक महिना अघि निचोटि थिए, र गवाही बढ्ने वा तल जान सक्छ?
मेरो श्रीमान्‌लाई सिरोसिसको शुरुवात अवस्था छ, ALT १,, एएसटी २१ 192, एक महिना अघि कम थिए, के पढाइ बढ्नेछ वा घट्न सक्छ? जिगर सिरोसिसको साथ जीवनको कसरी निदान हुन्छ? सामान्यतया सिरोसिसको लागि निदान ...
डायरेसिस भनेको के हो? स्वस्थ व्यक्तिमा कति पिसाब हुनुपर्दछ र बिरामीमा के हुन्छ?
डायरेसिस भनेको के हो? एक स्वस्थ व्यक्तिमा कति पिसाब छोड्नु पर्छ, र एक बिरामीमा कती? दैनिक पेशाब आउटपुट (मूत्र उत्पादन) धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ: लि gender्ग, उमेर, मात्रा ...
मलाई मस्कोमा एक राम्रो यूरोलोजिकल केन्द्र बताउनुहोस् !! अग्रिम धन्यवाद
मलाई मस्कोमा एक राम्रो यूरोलोजिकल केन्द्र बताउनुहोस् !! एटीपी अग्रिम http://www.uro.ru/ संघीय राज्य संस्था वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान यूरोलॉजी अफ रोसमेड टेक्नोलॉजीहरू अग्रणी रूसी वैज्ञानिक र प्रयोगात्मक, विधिगत र चिकित्सा यूरोलोजिकल केन्द्र हो। यूरोलजी अनुसंधान संस्थान एक उच्च-टेक हुन जान्छ ...
119 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 546,913 प्रश्नहरू।